【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】ကူးစကျမွနျ COVID 19 ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစိတျအသဈအကွောငျး တစတေ့စောငျး | Opinion Leaders
COVID 19 ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ 2019 နှဈကုနျပိုငျးကစလို့ ဝူဟနျမှာ အစပွုပီး တှရေ့ာကနေ ခုဆို တကမ်ဘာလုံး အနှံအပွား ဖွဈနတောပါ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံကွီးတှမှောတောငျ သနှေုနျး ကူးစကျနှုနျးမွငျ့ မားခဲ့တာ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာတော့ COVID ပထမလှိုငျးကို ကောငျးကောငျးကြျောဖွတျ နိုငျခဲ့တယျပဲ ပွောရမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ COVID 19 အပျေါ သတိပွုမှု ကာကှယျမှုတှတေောငျ လြော့လာကွပါ တယျ။ လတျတလော အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှမှော ဆယျဆ ကူးစကျမွနျတဲ့ COVID 19 မြိုး စိတျအသဈတခု စတငျပြံ့နှံ့နတော ကွားမိကွမှာပါ။ ခုဆို မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ပွညျပ (India) ပွနျ ပိုးကူးစကျသူတှမှော ဒီမြိုးစိတျအသဈကူးစကျမှု တှနေ့ရေပီလို့ သိရတဲ့အတှကျ ဒီ new strain အကွောငျး ဖျောပွပေးမှာပါ။
Virus က ဘယျနရောမှာ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲမှုဖွဈတာလဲ?
COVID 19 ဗိုငျးရပျဈအကွောငျး အနညျးငယျ အကြဥျးခြုံ့ပွနျပွောလိုပါတယျ...
-SARS CoV2ဗိုငျးရပျဈသညျ အကာ (Envelope) ပါတဲ့ Single stranded RNA virus (beta coronavirus) ဖွဈပါတယျ။
-သူ့မှာ ပရိုတိနျး ၄ မြိုးပါဝငျတယျ-
(၁)Envelope 'E' protein
(၂)Spike 'S' protein
(၃)Membrane 'M' protein နဲ့
(၄)Nucleocapsid 'N' protein
- ဗိုငျးရပျဈပုံလေးတှမှောပါတဲ့ မကျြနှာပွငျမှာ မွုပျနတေဲ့ အခြှနျ အတကျလေးတှကေ Spike လို့ချေါတဲ့ S protein လေးတှပေါ (ဒီအခြှနျလေးတှကေ သရဖူပုံစံနဲ့ ဆငျတူလို့ Corona virus လို့အမညျတှငျတာပါ)
-ခု တှရေ့တဲ့ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲခွငျး (mutation) ဖွဈစဥျက D614G mutation လို့ချေါပွီး အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ Spike protein လေးတှထေုတျတဲ့ gene အပိုငျးမှာ mutate ဖွဈတာပါ။
-ဗိုငျးရပျဈမှာပါတဲ့ အတကျပုံစံ spike proteins လေးတှကေ host cell လို့ချေါတဲ့ ကြှနျတျောတို့ အသကျရှုလမျးကွောငျးက ဆဲလျတှမှောရှိတဲ့ receptor နဲ့ပေါငျးမယျ ပီးရငျ အခှံ envelope လေးက host cell membrane နဲ့ပေါငျးသှားပီး ဗိုငျးရပျဈရဲ့ မြိုးရိုးဗီဇ (genome) ကို ကြှနျတျော တို့ ခန်ဓာကိုယျက ဆဲလျထဲကို ထညျ့လိုကျတာပါ။
-SARs CoV2 ရဲ့ genome က single stranded RNA ဖွဈပွီး nucleotides ပေါငျး ၂သောငျး ကြျောပါဝငျကာ amino acid ပေါငျး 9860 ကို ထုတျပေးပါတယျ။
-ဒီ amino acid တှေ ထဲက spike protein ကို ထုတျပေးမယျ့ genetic sequence နံပါတျ 614 နရောမှာ D ဖွဈရမယျ့အစား G လို့ ပွောငျးလဲသှားတာပါ။ ဒါကွောငျ့ Aspartic acid အစား glycine amino acid ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ ဒီ amino acid နှဈခုက ဖှဲ့စညျးပုံမတူတာကွောငျ့ ကူးစကျနှုနျး ပိုမြားစတောပါ။ တှရှေိ့ခကျြအရ ဒီ မြိုးစိတျသဈ G614 ကူးစကျခံရတဲ့သူတှရေဲ့ အသကျရှုလမျးကွောငျးတလြှောကျမှာ ဗိုငျးရပျဈအကောငျရဟော ယခငျ မြိုးစိတျအဟောငျးထကျ ပိုမြားမြားရှိနတေတျပွီး လူတယောကျကနေ တယောကျ ပိုမွနိမွနျ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ ဆယျဆနီးပါး ကူးစကျနှုနျးမွငျ့ပါတယျ။ ဒီတော့ စိုးရိမျစရာပါ။
ကူးစကျနှုနျး​နှဈဆမြားသလို ဒီ ဗိုငျးရပျဈ strain အသဈက ရောဂါဖွဈရငျရော ပိုဆိုးတတျလား?
တှရှေိ့ခကျြမြားအရ အလှယျတကူ ကူးစကျပမေယျ့ ရောဂါဖွဈရငျတော့ ပိုမဆိုးတတျပါဘူးတဲ့။ ခန်ဓာကိုယျ ခုခံအားစနဈကလညျး အရငျ strain အဟောငျးလိုပဲ တိုကျမှာပါ။
ရောဂါကုသရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးတှဖွေဈတဲ့ Dexamethasone, remdesivir စတဲ့ဆေးတှရေဲ့ ထိရောကျမှုကိုလညျး အပွောငျးအလဲတော့ မဖွဈစဘေူးလို့ တှထေ့ားတယျ ဆိုကွပါတယျ။
ကာကှယျဆေး vaccine ထုတျရာမှာရော အပွောငျးအလဲရှိနိုငျလား?
ဗိုငျးရပျဈမြိုးစိတျတှဟော အမွဲနီးပါး မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲခွငျး ဖွဈနတောပါ။ ဒါကွောငျ့ပဲ အသဈထှကျတဲ့ မြိုးစိတျတှအေတှကျ ကာကှယျဆေးအသဈရှာရမလား စိတျပူစရာပါ။ အတိအကမြပွောနိုငျသေးပမေယျ့ ခု spike protein ပွောငျးလဲမှုက ဗိုငျးရပျဈရဲ့ antigenic အပိုငျးကိုတော့ မပွောငျးလဲစလေို့ vaccine ထုတျရာမှာတော့ အနှောငျ့အယှကျမဖွဈဘူးလို့ သိရလို့ ဝမျးသာစရာပါ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ပွညျတှငျးကူးစကျမှုတှလေညျး ပွနျမြားလာပီ၊ မြိုးစိတျအသဈကလညျး ဆယျဆ ကူစကျနှုနျးမြားတယျဆိုတော့ မပေါ့ကွဖို့နဲ့
-အပွငျသှားဖို့လိုရငျ mask နှာခေါငျးစညျး အမွဲတပျပါ
-ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျတဲ့ ညှနျကွားခကျြတှကေို လိုကျနာပါ
အားလုံးပဲ ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါစေ။ ။
COVID 19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ 2019 နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့ ဝူဟန်မှာ အစပြုပီး တွေ့ရာကနေ ခုဆို တကမ္ဘာလုံး အနှံအပြား ဖြစ်နေတာပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် သေနှုန်း ကူးစက်နှုန်းမြင့် မားခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ COVID ပထမလှိုင်းကို ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့တယ်ပဲ ပြောရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ COVID 19 အပေါ် သတိပြုမှု ကာကွယ်မှုတွေတောင် လျော့လာကြပါ တယ်။ လတ်တလော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဆယ်ဆ ကူးစက်မြန်တဲ့ COVID 19 မျိုး စိတ်အသစ်တခု စတင်ပျံ့နှံ့နေတာ ကြားမိကြမှာပါ။ ခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပြည်ပ (India) ပြန် ပိုးကူးစက်သူတွေမှာ ဒီမျိုးစိတ်အသစ်ကူးစက်မှု တွေ့နေရပီလို့ သိရတဲ့အတွက် ဒီ new strain အကြောင်း ဖော်ပြပေးမှာပါ။
Virus က ဘယ်နေရာမှာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာလဲ?
COVID 19 ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း အနည်းငယ် အကျဉ်းချုံ့ပြန်ပြောလိုပါတယ်...
-SARS CoV2ဗိုင်းရပ်စ်သည် အကာ (Envelope) ပါတဲ့ Single stranded RNA virus (beta coronavirus) ဖြစ်ပါတယ်။
-သူ့မှာ ပရိုတိန်း ၄ မျိုးပါဝင်တယ်-
(၃)Membrane 'M' protein နဲ့
- ဗိုင်းရပ်စ်ပုံလေးတွေမှာပါတဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ မြုပ်နေတဲ့ အချွန် အတက်လေးတွေက Spike လို့ခေါ်တဲ့ S protein လေးတွေပါ (ဒီအချွန်လေးတွေက သရဖူပုံစံနဲ့ ဆင်တူလို့ Corona virus လို့အမည်တွင်တာပါ)
-ခု တွေ့ရတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း (mutation) ဖြစ်စဉ်က D614G mutation လို့ခေါ်ပြီး အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Spike protein လေးတွေထုတ်တဲ့ gene အပိုင်းမှာ mutate ဖြစ်တာပါ။
-ဗိုင်းရပ်စ်မှာပါတဲ့ အတက်ပုံစံ spike proteins လေးတွေက host cell လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းက ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ receptor နဲ့ပေါင်းမယ် ပီးရင် အခွံ envelope လေးက host cell membrane နဲ့ပေါင်းသွားပီး ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ (genome) ကို ကျွန်တော် တို့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်ထဲကို ထည့်လိုက်တာပါ။
-SARs CoV2 ရဲ့ genome က single stranded RNA ဖြစ်ပြီး nucleotides ပေါင်း ၂သောင်း ကျော်ပါဝင်ကာ amino acid ပေါင်း 9860 ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
-ဒီ amino acid တွေ ထဲက spike protein ကို ထုတ်ပေးမယ့် genetic sequence နံပါတ် 614 နေရာမှာ D ဖြစ်ရမယ့်အစား G လို့ ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ ဒါကြောင့် Aspartic acid အစား glycine amino acid ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဒီ amino acid နှစ်ခုက ဖွဲ့စည်းပုံမတူတာကြောင့် ကူးစက်နှုန်း ပိုများစေတာပါ။ တွေ့ရှိချက်အရ ဒီ မျိုးစိတ်သစ် G614 ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်အကောင်ရေဟာ ယခင် မျိုးစိတ်အဟောင်းထက် ပိုများများရှိနေတတ်ပြီး လူတယောက်ကနေ တယောက် ပိုမြနိမြန် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ဆနီးပါး ကူးစက်နှုန်းမြင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ စိုးရိမ်စရာပါ။
ကူးစက်နှုန်း​နှစ်ဆများသလို ဒီ ဗိုင်းရပ်စ် strain အသစ်က ရောဂါဖြစ်ရင်ရော ပိုဆိုးတတ်လား?
တွေ့ရှိချက်များအရ အလွယ်တကူ ကူးစက်ပေမယ့် ရောဂါဖြစ်ရင်တော့ ပိုမဆိုးတတ်ပါဘူးတဲ့။ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်ကလည်း အရင် strain အဟောင်းလိုပဲ တိုက်မှာပါ။
ရောဂါကုသရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Dexamethasone, remdesivir စတဲ့ဆေးတွေရဲ့ ထိရောက်မှုကိုလည်း အပြောင်းအလဲတော့ မဖြစ်စေဘူးလို့ တွေ့ထားတယ် ဆိုကြပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး vaccine ထုတ်ရာမှာရော အပြောင်းအလဲရှိနိုင်လား?
ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တွေဟာ အမြဲနီးပါး မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ အသစ်ထွက်တဲ့ မျိုးစိတ်တွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးအသစ်ရှာရမလား စိတ်ပူစရာပါ။ အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမယ့် ခု spike protein ပြောင်းလဲမှုက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ antigenic အပိုင်းကိုတော့ မပြောင်းလဲစေလို့ vaccine ထုတ်ရာမှာတော့ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးလို့ သိရလို့ ဝမ်းသာစရာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေလည်း ပြန်များလာပီ၊ မျိုးစိတ်အသစ်ကလည်း ဆယ်ဆ ကူစက်နှုန်းများတယ်ဆိုတော့ မပေါ့ကြဖို့နဲ့
-အပြင်သွားဖို့လိုရင် mask နှာခေါင်းစည်း အမြဲတပ်ပါ
-ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပါ
အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ ။